Ukunyuka kwetypography enesibindi | Abadali be-Intanethi
Ukunyuka kwe-typography enesibindi
Ngokuqinisekileyo kumatyeli amaninzi, uchithe iiyure ukhangela phakathi kwamawakawaka eefonti ezikhoyo, ukufumana eyona ifanelekileyo okanye leyo inokusebenza ngcono kwiprojekthi yakho. Kwaye xa sele unayo, uyayisebenzisa kwaye ayibi njengoko ubucinga. Oku kuye kwenzeka kuninzi lwethu. Oku kungenxa Iifonti esizikhethileyo azichazi into ofuna ukuyibonisa ngomsebenzi wakho.
Iifonti, njengemibala, nazo zinobuntu kunye nezimbo ezahlukeneyo. Kuxhomekeke ekubeni yeyiphi ekhethiweyo, umyalezo omnye okanye omnye unokuhanjiswa. Ngoko ke, kule post Siza kuthetha nawe malunga neefonti ezingqindilili, apho unokuzisebenzisa kwaye siya kukunika indibaniselwano yokuchwetheza engaze isilele.
1 Yintoni injongo yefonti engqindilili?
2 Impumelelo yokuchwetheza ngesibindi
3 Ukuchwetheza ngokungqindilili, ubungakanani obukhulu okanye obuncitshisiweyo
4 Indibaniselwano yokuchwetheza kufuneka uyazi
4.1 IHelvetica Neue kunye neGaramond
4.2 Ukurhweba ngeGothic kunye neSabon
4.3 I-Courier kunye ne-Montserrat
4.4 I-Baskerville kunye ne-Akzidenz Grotesk
Yintoni injongo yefonti engqindilili?
Iifonti zisenokudlulisa imvakalelo kuthi, ke ngoko, ibalulekile ukwazi indlela yokukhetha eyona ndlela ifanelekileyo yokuchwetheza ukuhlangabezana neemfuno zethu kwimisebenzi. Ngoko ke, into yokuqala ekufuneka sihlule yinto esifuna ukuyidlulisela, oko kukuthi, ukunyaniseka, ukusondelana, ukuhambelana kwesimanje, njl.
Enye ye iintsingiselo kuyilo lwegraphic, kusetyenziso lweefonti ezingqindilili okanye kwaziwa ngokuba ngqindilili. Olu lwantlukwano, phakathi kwabalinganiswa, lolona ngqindilili kwaye lungqukuva, olubizwa ngokuba luqhelekileyo.
Kwiifonti ezingqindilili, sifumanisa ukuba zabo I-axis ethe tyaba ijiyile kune-axis ethe nkqo ehlala iphantse yafana. Imivumbo yoonobumba yanda ukuya kububanzi, hayi ukuphakama.
Njengoko usenokuba ubonile ngamanye amaxesha, xa ukhuphela ifonti, ayizizo zonke ezinobunzima bobunzima, ayizizo zonke ezinesibindi. Lo mahluko, ukuba uya kuwufumana, kwiifonti ezi ngqo ekufundeni izicatshulwa ezinoxinaniso oluphakathi okanye izihloko, nangona kumaxesha amaninzi le mithetho yophulwa.
Igama elithi bold livela kwihlabathi le-Anglo-Saxon, kodwa sele sisazi ukuba siyalithanda ngokwenene igama ngesiNgesi, kodwa lilo. mnyama kubo bonke ubomi.
Impumelelo yokuchwetheza ngesibindi
Ngenxa yokukhula koonobumba, kuye kwakhokelela ekubeni Ukuchwetheza kube yinto eyimfuneko kwaye oku kusengcono. Oku akuthethi ukuba ukuba awulawuli ubuchule bokubhala awukho kweli hlabathi, sikwanaso nesikhewu nokuba sisebenza ngoonobumba abayilwe kwangaphambili.
Olunye utyekelo oluye lwayiguqula indlela yokusetyenziswa kwe-typography yi ukuthambekela kuyilo oluncinci ngakumbi, kuba iifonti zibe zimbindi zokuqamba kunye nawo onke amehlo.
Uhlobo olunesibindi, olukhulu luthetha ngcono, ukutsala ingqalelo yoluntu. I i-typography, yeyona nto iphambili yoyilo lwelogo, iipowusta, amaphepha ewebhu, iincwadana, njl.. nayiphi na inkxaso. Olu luyilo lwaziwayo, loyilo lokuchwetheza, uyilo apho ifonti inako konke ukubaluleka kokwakheka.
Ukuchwetheza ngokungqindilili, ubungakanani obukhulu okanye obuncitshisiweyo
Enye ye iintsingiselo eziye zanyuka, kukusetyenziswa kwe-typography ngobukhulu obukhulu kakhulu, ukwenzela ukunika ubuntu kwiitekisi zeengqungquthela kunye nokuthatha ukuvelela kwizinto ezijikelezayo. Oku kukhokelela ekubeni i-typography ibe yimbindi yengqwalasela kuluntu.
Asikuphela nje ukubona obu buchule kwiipowusta, iincwadana okanye iiflaya, bukwasetyenziswa ekudaleni iilogo. Abaninzi Iimpawu zifuna ukuba umyalezo wazo ukhwazwe phezu kwezindlu, ukuba logo yakho ayikho nje enye ngakumbi kuluntu, ukuba igqame ngaphezu kwabo bonke okhuphisana nawe.
Ukusetyenziswa kochwethezo olungqindilili, sinokukubona kwiinkxaso ezininzi isetyenziswe, njengoko sibonile kwiipowusta, kwiilogo, kodwa nakumaphepha ewebhu okanye nakwiincwadana zentengiso okanye isiganeko.
Kuyilo lwephepha lewebhu, ukusetyenziswa kombhalo kunolwazi, okwenza kube ngumba osisiseko woyilo. Xa usenza iphepha lewebhu, kufuneka kucace ukuba i Isicatshulwa masibe mfutshane kwaye singqale, ukongezelela ekubeni sifundeka kakuhle xa sifunda.
Abanye abayili, zombini imizobo kunye newebhu, nxulumanisa ukufaneleka kweetekisi kunye nokuchwetheza okungqindilili kunye nobukhulu obukhulu, yonke into engaphezulu kwamanqaku angama-20. Ngale nto, akukho nto iya kusala ingabonwa okanye ifundwe.
Indibaniselwano yokuchwetheza kufuneka uyazi
Ukuba sele ulinyathelo elinye ngokusondeleyo ekujoyineni lo mkhwa wokuchwetheza ngesibindi, kodwa awukacaci kakuhle malunga nokhetho lokuchwetheza, ungakhathazeki, siza kukunika okuthile. indibaniselwano yokuchwetheza ukuze uphumelele kuyilo lwakho, yaye akusayi kuba saba nasingxengxezo sokungaguqukeli kwicala elimnyama.
Akunakwenzeka ukuthetha malunga noyilo lwegraphic ngaphandle kokuthetha malunga nendibaniselwano yokuchwetheza. Kwaye yiloo nto, i-typography inamandla okuphakamisa uyilo okanye ukutshona ngokupheleleyo. Njengoko sisazi ukuba akukho lula ukufumana, kumaxesha amaninzi, ukuphumelela imidibaniso yeefonti, sikuphathele abambalwa ukukunika isandla, sisigqibo sakho ukuba ungayisebenzisa phi ifonti engqindilili.
IHelvetica Neue kunye neGaramond
Saqala ngeklasikhi enkulu, kodwa leyo yenye indibaniselwano yefonti esebenza ngcono, uya kuhlala ubetha isikhonkwane entloko. Ayisiyonto yoqobo, kodwa kumaxesha amaninzi kufuneka uyidlale ngokukhuselekileyo. Kule meko sicebisa ukusebenzisa i-Helvetica Neue kwizihloko kunye neGaramond yebhloko yokubhaliweyo.
Ukurhweba ngeGothic kunye neSabon
Enye yeefonti kubhejo olukhuselekileyo luRhwebo lweGothic kwaye ukuba wenza indibaniselwano nohlobo lweserif efana neSabon, indibaniselwano egqibeleleyo. Kule meko sicebisa ukuba wenze ngokuchaseneyo necandelo langaphambili. Ukuchwetheza ngeeserif, iSabon, yesihloko, kunye ne-sans-serif yokubhaliweyo okulandelayo.
I-Courier kunye ne-Montserrat
Njengoko sixoxile kwenye yezithuba zethu, kukho abathandi abaninzi uchwethezo lomatshini wokuchwetheza, kwaye luhambo olupheleleyo. Esi sitayela sokuchwetheza, sidityaniswe neMontserrat, impumelelo eqinisekisiweyo.
I-Baskerville kunye ne-Akzidenz Grotesk
Indibaniselwano ephumeleleyo, nokuba yeyiphi na indlela okhangeleka ngayo. I-Serif typeface efana ne-Baskerville, kunye nohlobo lwe-sans-serif olufana ne-Akzidenz Grotesk, umahluko ogqibeleleyo. Indibaniselwano onokuyisebenzisa njengoko ubona kufanelekile, kwimeko yethu siya kusebenzisa i-serif yezihloko, kunye ne-sans-serif yokubhaliweyo.
Siya kuba simise ikhulu leepesenti zendibaniselwano, amawaka eendibaniselwano kunye neefonti kwinguqulelo yazo engqindilili, ukohlukana noko kusekiweyo kwaye unike inkangeleko entsha kuyilo.
Ukusuka apha siyakumema ukuba untywilisele kweli hlabathi lobumnyama, kwaye uqale ukudala imisebenzi ekhalayo ukusuka eluphahleni kusetyenziswa iifonti ezingqindilili.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ukuphefumlelwa » Ukunyuka kwe-typography enesibindi
Uyenza njani imifanekiso yeDuotone Effect kwiPhotoshop
UYilo lweMagazini omele Ulazi